बाथरुम छिरेर किन रुन्छन युवतीहरु ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने - IAUA
बाथरुम छिरेर किन रुन्छन युवतीहरु ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने
ramkrishna October 15, 2017	बाथरुम छिरेर किन रुन्छन युवतीहरु ? हरेक पुरुषले पढ्नै पर्ने
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिलाहरुमा सम्भोग पछि उदासी तथा निरास भावना पैदा हुने गर्छ । अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीका आर्थर रोबर्टले गरेको सर्भेक्षण अनुसार सहमतीमै सेक्स गरिसकेपछि पनि महिलामा उदासी भावना जागृत हुन्छ । उनका अनुसार यो एक प्रकारको आम स्वास्थ्य समस्या हो । रोबर्ट र उनको टोलीले २३० जना महिलामा सर्भेक्षण गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले पाए की निकै आनन्ददायी तथा आपसी सहमतीमै गरिएको रोमान्चक सेक्सको सत्र सकिएपछि समेत महिलाहरुमा एक प्रकारको उदासी तथा निरासीपन छाउँदछ । यस्तो भावनाका कारण महिलाहरु कहिलेकाहीँ रुन्छन् पनि । अनि यस्तो असरले ४ हप्तासम्म महिलालाई पिरोलेको हुन्छ । अध्ययनमा संलग्न महिलामध्ये ५ प्रतिशतले पछिल्लो एक महिनाभित्रमा आफुले यस्तो अनुभुति गरेको खुलासा गरे भने ४६ प्रतिशतले जिवनमा कम्तीमा एकचोटी आफुलाई यस्तो अनुभुति भएको बताए । सर्भेक्षणमा लिइएकी एक महिलाको कथा त निकै अनौठो पाइएको छ । उनको विवाह भएको २० वर्ष भैसकेको छ । उनी आफ्नो श्रीमानसँग नियमित रुपमा सम्भोग पनि गर्छिन् । तर सहवास गरिसकेपछि उनी प्रायः बाथरुमभित्र छिरेर एकचोटी मज्जाले रुने गर्छिन् । शोधकर्ताहरुका अनुसार सेक्सका दौरान उत्तेजना, आनन्द, चरमोत्कर्ष तथा दुखाइ जस्तै उदासी भावना पनि आम महिलाको एक स्वभाविक भावनात्मक अभिव्यक्तिको रुपमा रहेको हुन्छ । यो हरेक महिलामा हुन्छ, मात्र फरक भनेको कसैमा बढि हुन्छ त कसैमा कम ।
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिलाहरुमा सम्भोग पछि उदासी तथा निरास भावना पैदा हुने गर्छ । अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीका आर्थर रोबर्टले गरेको सर्भेक्षण अनुसार सहमतीमै सेक्स गरिसकेपछि पनि महिलामा उदासी भावना जागृत हुन्छ । उनका अनुसार यो एक प्रकारको आम स्वास्थ्य समस्या हो । रोबर्ट र उनको टोलीले २३० जना महिलामा सर्भेक्षण गरेका थिए ।त्यस क्रममा उनीहरुले पाए की निकै आनन्ददायी तथा आपसी सहमतीमै गरिएको रोमान्चक सेक्सको सत्र सकिएपछि समेत महिलाहरुमा एक प्रकारको उदासी तथा निरासीपन छाउँदछ । यस्तो भावनाका कारण महिलाहरु कहिलेकाहीँ रुन्छन् पनि । अनि यस्तो असरले ४ हप्तासम्म महिलालाई पिरोलेको हुन्छ । अध्ययनमा संलग्न महिलामध्ये ५ प्रतिशतले पछिल्लो एक महिनाभित्रमा आफुले यस्तो अनुभुति गरेको खुलासा गरे भने ४६ प्रतिशतले जिवनमा कम्तीमा एकचोटी आफुलाई यस्तो अनुभुति भएको बताए । सर्भेक्षणमा लिइएकी एक महिलाको कथा त निकै अनौठो पाइएको छ । उनको विवाह भएको २० वर्ष भैसकेको छ ।उनी आफ्नो श्रीमानसँग नियमित रुपमा सम्भोग पनि गर्छिन् । तर सहवास गरिसकेपछि उनी प्रायः बाथरुमभित्र छिरेर एकचोटी मज्जाले रुने गर्छिन् । शोधकर्ताहरुका अनुसार सेक्सका दौरान उत्तेजना, आनन्द, चरमोत्कर्ष तथा दुखाइ जस्तै उदासी भावना पनि आम महिलाको एक स्वभाविक भावनात्मक अभिव्यक्तिको रुपमा रहेको हुन्छ । यो हरेक महिलामा हुन्छ, मात्र फरक भनेको कसैमा बढि हुन्छ त कसैमा कम ।
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिलाहरुमा सम्भोग पछि उदासी तथा निरास भावना पैदा हुने गर्छ । अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीका आर्थर रोबर्टले गरेको सर्भेक्षण अनुसार सहमतीमै सेक्स गरिसकेपछि पनि महिलामा उदासी भावना जागृत हुन्छ । उनका अनुसार यो एक प्रकारको आम स्वास्थ्य समस्या हो । रोबर्ट र उनको टोलीले २३० जना महिलामा सर्भेक्षण गरेका थिए ।त्यस क्रममा उनीहरुले पाए की निकै आनन्ददायी तथा आपसी सहमतीमै गरिएको रोमान्चक सेक्सको सत्र सकिएपछि समेत महिलाहरुमा एक प्रकारको उदासी तथा निरासीपन छाउँदछ । यस्तो भावनाका कारण महिलाहरु कहिलेकाहीँ रुन्छन् पनि । अनि यस्तो असरले ४ हप्तासम्म महिलालाई पिरोलेको हुन्छ । अध्ययनमा संलग्न महिलामध्ये ५ प्रतिशतले पछिल्लो एक महिनाभित्रमा आफुले यस्तो अनुभुति गरेको खुलासा गरे भने ४६ प्रतिशतले जिवनमा कम्तीमा एकचोटी आफुलाई यस्तो अनुभुति भएको बताए ।
सर्भेक्षणमा लिइएकी एक महिलाको कथा त निकै अनौठो पाइएको छ । उनको विवाह भएको २० वर्ष भैसकेको छ । उनी आफ्नो श्रीमानसँग नियमित रुपमा सम्भोग पनि गर्छिन् । तर सहवास गरिसकेपछि उनी प्रायः बाथरुमभित्र छिरेर एकचोटी मज्जाले रुने गर्छिन् । शोधकर्ताहरुका अनुसार सेक्सका दौरान उत्तेजना, आनन्द, चरमोत्कर्ष तथा दुखाइ जस्तै उदासी भावना पनि आम महिलाको एक स्वभाविक भावनात्मक अभिव्यक्तिको रुपमा रहेको हुन्छ । यो हरेक महिलामा हुन्छ, मात्र फरक भनेको कसैमा बढि हुन्छ त कसैमा कम । हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिलाहरुमा सम्भोग पछि उदासी तथा निरास भावना पैदा हुने गर्छ । अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीका आर्थर रोबर्टले गरेको सर्भेक्षण अनुसार सहमतीमै सेक्स गरिसकेपछि पनि महिलामा उदासी भावना जागृत हुन्छ । उनका अनुसार यो एक प्रकारको आम स्वास्थ्य समस्या हो । रोबर्ट र उनको टोलीले २३० जना महिलामा सर्भेक्षण गरेका थिए ।
त्यस क्रममा उनीहरुले पाए की निकै आनन्ददायी तथा आपसी सहमतीमै गरिएको रोमान्चक सेक्सको सत्र सकिएपछि समेत महिलाहरुमा एक प्रकारको उदासी तथा निरासीपन छाउँदछ । यस्तो भावनाका कारण महिलाहरु कहिलेकाहीँ रुन्छन् पनि । अनि यस्तो असरले ४ हप्तासम्म महिलालाई पिरोलेको हुन्छ । अध्ययनमा संलग्न महिलामध्ये ५ प्रतिशतले पछिल्लो एक महिनाभित्रमा आफुले यस्तो अनुभुति गरेको खुलासा गरे भने ४६ प्रतिशतले जिवनमा कम्तीमा एकचोटी आफुलाई यस्तो अनुभुति भएको बताए । सर्भेक्षणमा लिइएकी एक महिलाको कथा त निकै अनौठो पाइएको छ । उनको विवाह भएको २० वर्ष भैसकेको छ ।उनी आफ्नो श्रीमानसँग नियमित रुपमा सम्भोग पनि गर्छिन् । तर सहवास गरिसकेपछि उनी प्रायः बाथरुमभित्र छिरेर एकचोटी मज्जाले रुने गर्छिन् । शोधकर्ताहरुका अनुसार सेक्सका दौरान उत्तेजना, आनन्द, चरमोत्कर्ष तथा दुखाइ जस्तै उदासी भावना पनि आम महिलाको एक स्वभाविक भावनात्मक अभिव्यक्तिको रुपमा रहेको हुन्छ । यो हरेक महिलामा हुन्छ, मात्र फरक भनेको कसैमा बढि हुन्छ त कसैमा कम ।
Previous Previous post: कतारमा रहने प्रत्यक कामदार लाई खुसीको खबर एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस
Next Next post: दुःख पाउनु छैन भने कहिले नगर्नुहोस् भगवानका यी ५ मूर्तीको दर्शन